ASUS Vivobook X509JP-EJ027T Star Grey (i5-10th Gen)-9 – ICT.com.mm
HomeASUS Vivobook X509JP-EJ027T Star Grey (i5-10th Gen)-9
ASUS Vivobook X509JP-EJ027T Star Grey (i5-10th Gen)-9
Intel® Core™ i5, 1035G1 1.00Ghz (6MB Cache, up to 3.60Ghz) Windows 10 Home – ASUS recommends Windows 10 Pro for business Memory:4GB DDR4 2666MHz SDRAM Onboard memory Display: 15.6″ (16:9)... [Learn more]
Brand: ASUSSKU: 154096N/ASee more: ASUS, Asus Laptops, Computer Systems, Laptops / Notebooks, New Arrivals, ProductsFilter by: 15.6", 1TB HDD, 4GB RAM, Asus Laptops, DG, Gray, Intel Core i5-10th Gen, Laptops (PC), NVIDIA GeForce MX 330 2GB, USD, Windows 10 Home
Intel® Core™ i5, 1035G1 1.00Ghz (6MB Cache, up to 3.60Ghz)
Memory:4GB DDR4 2666MHz SDRAM Onboard memory
Storage: HDD 1TB 5400 RPM, M.2 SATA III Slot Free
Graphic: NVIDIA® GeForce® MX330 , with 2GB GDDR5 VRAM
Battery: 2-Cell 32 Wh Battery
Performance ကောင်းမွန်ပြီး ဂရပ်ဖစ်ကတ်ပါတဲ့ i5 Laptop တစ်လုံးကို ရှာနေရင် ဒီ ASUS Vivobook လေးက ရွေးချယ်ချင်စရာ ရုံးသုံး Laptop ကောင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင် အရွယ်အစား 15.6” နဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားပြီး ဘေးဘောင်မဲ့ဒီဇိုင်း ဖြစ်တဲ့အတွက် Laptop ကို မြင်ကွင်းကျယ်နဲ့ အသုံးပြုချင်သူတွေ အကြိုက်တွေ့ကြမှာပါ။ Full HD Display ဖြစ်တဲ့အတွက် ရုပ်ထွက်ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး Anti-glare နည်းပညာပါဝင်တာကြောင့် ဘယ်လိုနေရာမှာဖြစ်ဖြစ် အလင်းမပြန်ဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ် i5-10th Gen Processor က Laptop ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြန်ဆန်သွက်လက်စေမှာဖြစ်ပြီး RAM 4GB (On Board Memory) က ရုံးလုပ်ငန်းသုံးအတွက် လုံလောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒေတာသိမ်းဆည်းမှုအတွက် 5400 RPM အမြန်နှုန်းရှိတဲ့ HDD (1TB) ကို တပ်ဆင်ပေးထားတာကြောင့် မိမိရဲ့ ဒေတာတွေကို အမြောက်အများ သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ M.2 SATA III Slot အလွတ်ပါဝင်တာကြောင့် မိမိရဲ့ Laptop ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေဖို့ Upgrade ပြုလုပ်ချင်လာရင်လည်း အလွယ်တကူပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ NVIDIA® GeForce® MX330 (2GB) ဂရပ်ဖစ်ကတ်ကို တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် Laptop နဲ့ ဂိမ်းကစားတတ်သူတွေကို ပိုမို အဆင်ပြေစေမှာပါ။ ဘတ္ထရီပိုင်းအတွက် 2-Cell 32 Wh ဘတ္ထရီကိုတပ်ဆင်ပေးထားပြီး Finger Print Reader ပါဝင်တဲ့အတွက် မိမိရဲ့ Laptop ကို လက်နဲ့တစ်ချက်ထိရုံနဲ့ အလွယ်တကူ Login ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ OS အဖြစ် Windows 10 Home ကို ထည့်သွင်းပေးထားပြီး ဗိုင်းရပ်စ်တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ MyASUS McAfee ဆော့ဖ်ဝဲကိုလည်း တစ်နှစ်စာ အခမဲ့ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ASUS ရဲ့ Original Backpack တစ်လုံးကို လက်ဆောင် ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့် မိမိသွားလေရာကို အဆင်ပြေပြေနဲ့ သယ်ယူသွားနိုင်မှာပါ။
Whether for work or play, ASUS X509 is the entry-level laptop that delivers powerful performance and immersive visuals. Its NanoEdge display boasts wide 178° viewing angles andamatte anti-glare coating foratruly engaging experience. Inside, it’s powered by up to an 10th Generation Intel® Core™ i7 processor with up to 16GB 2400MHz RAM, and features NVIDIA® MX330 discrete graphics. A dual-storage design with up toa512GB PCIe® SSD and 1TB HDD gives you the perfect combination of large storage capacity and fast data read/write speeds. There’s even Intel Optane™ memory1 to help speed things up.
The full-size backlit keyboard2 on ASUS X509 is perfect for working in dim environments. Ergonomically-designed, its sturdy, one-piece construction and 1.4mm key travel provideacomfortable typing experience.
ASUS X509 is equipped with the reversible USB-C™ 3.1 port, featuring an any-way-up design that makes connecting devices as easy as possible. It also delivers data transfer speeds up to 10x faster3 than older USB 2.0 connections! There are USB 3.1 and USB 2.0 ports, HDMI output, andamicroSD card reader — so you can easily connect all your current peripherals, displays and projectors with zero hassle.